Caqabadaha dubista | Sapsa
Tartankii ugu horreeyay ee dubista ah!
Ku soo dhowow Dugsiga Hoose ee Saint Anthony Park ee markii ugu horreysay abid loo aqoonsaday inuu yahay 'Naiiler It' loolan adag!
Dhamaanteen waan aragnay, waan ku nacnacnay (netflix) martida qosolka badan, garsoorayaasha martida waalida ah iyo inta badan dhamaan kuwa cajiibka badan ee wax dubaya kuwaas oo aad isugu dayaya caqabadaha aadka u adag. Marka annaga oo ah SAPSA waxaan u maleynay inay fikrad xiiso leh u tahay dhammaan ardaydeena (iyo qoysaska) inay isku dayaan gacantooda dubista iyo qurxinta.
Markaa xir xijaabkaaga, gacmahaaga dhaq, iskuna mashquul. Ma sugi karno inaan aragno waxa aad abuurto!
- Sida loo ciyaaro -
U dir sawirka buskudkaaga qurxinta:
Soo gudbinta la aqbalay laga bilaabo Diisambar 19-Janaayo 1
Fadlan booqo quudinta baraha bulshada
Janaayo 4deeda si aad u aragto qolalka una codee kuwa aad jeceshahay.
Dhowr kaqeybgalayaal nasiib badan ayaa xitaa ku guuleysan doona abaalmarin!
- Caqabada 1 -
Iska yaree qurxinta buskudka
Ma jirto hab qaldan oo sidan lagu sameeyo. Dooro mid ama labadaba, waxaad doonto. Baashaal, hal abuur samee. Waad samayn kartaa!
Dhamaanteen waan jecel nahay nalalka ciidaha! Marka haddaba aan u oggolaanno inay ku rido buskud!
Na tus waxa aad heshay.
- Qabow baraf ah
- Qoraal madow, ama midab ubax aad sameysid iyo
isticmaal bacda dhuumaha ama bacda ziplock
Talo: ku carbi adoo ku qoraya qormada tuwaal waraaq ah kahor
waxaad ku dhejisay buskudka
NOOGO! Waan jeclahay, laakiin ninkan miskiinka ah wuxuu ka soo galay qabowga oo bilaabay inuu dhalaaliyo.
- Dhaxan qabow
- Cabbirka joogtada ah ee M & M's
- midab madow, ama pretzels
- saydh sayniska sanka
Talo: Waqti adag ayaan la qaatay kan. Way adkaan kartaa in la helo muuqaalka barafka dhalaalay. Markasta oo dheecaankaaga dheecaanku ka sii yaraado, way fududaanaysaa in la helo si ay u muuqato mid qoyan.
Waan iska raacay! Ma sugi karo waxaan arko waxaad la timaado.
Haddii aad jeceshahay dubista, sameynta qashin iyo baashaal markaa taasi adigaa iska leh! Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa caqabado ku saabsan dubista liisaska maaddooyinka iyo qaababka aad u abuuri karto.
Caqabadayada ugu horeysa waxaan sameyn doonaa Kukiyada Dalxiis Fasax ah. Loolankeennu wuxuu bilaabmayaa Sabtida, Diseembar 19.
Ka daawo meeshan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida looga qayb qaato.
Waa tan waxa aan la imid ...
Halkan waxaa ku yaal xiriiriye ku saabsan habka ugu fiican ee loo gooyo cookie!
Halkan waxaa ku yaal iskuxiraha barafka aan jeclahay!